Turbine axis mitsangana sy mitsivalana, ahoana no fiasan'izy ireo? | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 01/05/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 14/06/2021 15:52 | Herin'ny rivotra, Angovo azo havaozina
Un turbine mitsangana mitsangana u marindrano dia toy ny mpamokatra herinaratra mandeha manova ny angovo kinetika amin'ny rivotra amin'ny angovo mekanika ary amin'ny alàlan'ny turbinin'ny rivotra amin'ny angovo herinaratra.
Misy karazany roa lehibe ny turbine axis mitsangana sy marindrano. Ireo izay manana axis mitsangana dia miavaka fa tsy mila ny mekanisma orientation ary inona ny generator elektrika azo alamina amin'ny tany. Etsy ankilany, ireo izay manana axis marindrano no be mpampiasa indrindra ary mamela ny fandrakofana karazana rindrambaiko mitoka-monina misy herinaratra kely hatramin'ny fametrahana ao amin'ireo toeram-piompiana misy rivotra be.
Handinika lalina ireo lehibe roa isika, toy ny turbine axis mitsivalana sy mitsivalana voalaza etsy ambony, ary inona izany tolo-kevitra vaovao manandrana mitrandraka be indrindra amin'izany amin'ny rivotra hamokarana angovo herinaratra. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay nandrosoan'ny teknolojia isika ary mahita tolo-kevitra vaovao isaky ny fotoana toy ny turbine tsy misy propeller an'ny tetikasa Vortex na ilay Wind Tree, karazana hazo mekanika izay mamokatra angovo mangina.
1 Inona no atao hoe turbinin'ny rivotra mitsangana?
1.1 Savonius karazana
2 Ahoana ny fomba fiasan'ny turbine axis mitsangana?
3 Turbine axis marindrano
4 Karazana turbinin'ny rivotra inona no mahomby kokoa?
5 Fampiasana turbin-drivotra sy tantara
6 Ny hoavin'ny turbin-drivotra
6.1 Ny haitao misy turbine mitsingevana
6.2 Turbines Rivotra Proportless Vortex
6.3 Hazo rivotra
7 Ampahany amin'ny turbinin'ny rivotra
7.3 Blades sy rotor
7.4 Ny gondola
7.7 Rafitra fanapahana
7.8 Rafitra fanaraha-maso
Inona no atao hoe turbinin'ny rivotra mitsangana?
Ny turbinina axis mitsangana dia turbinin'ny rivotra izay ametrahana ny hazo rotor amin'ny toerana mijidina ary afaka mamokatra herinaratra na avy aiza na avy aiza no ihavian'ny rivotra. Ny tombony an'ity karazana turbinin'ny rivotra mitsangana ity dia afaka mamokatra herinaratra na dia amin'ny toerana misy rivotra kely aza ary ny faritra an-tanàn-dehibe izay mandrara ny fametrahana ny turbine mitsivalana amin'ny ankapobeny ny lalàna mifehy ny fananganana trano.
Araka ny voalaza, turbine axis mitsangana na mitsangana tsy mila mekanisma orientation ary inona no mety ho mpamokatra herinaratra hita amin'ny tany. ny ambany ny famokarana angovo ary manana kilema kely kely toy ny mila mandeha moto vao afaka mandeha.
Misy izany karazana turbin-drivotra mitsivalana telo toa an'i Savonius, Giromill ary Darrrieus.
Mampiavaka izany ny maha-izy azy niforona tamin'ny semicircles roa nafindra mitsivalana amin'ny halaviran-dàlana iray, izay ivoahan'ny rivotra, noho izany dia mamokatra herinaratra kely.
Miavaka amin'ny fananana a napetraka ny tsivalana mitsivalana miraikitra miaraka amin'ny bara roa eo amin'ny axis mitsangana ary manolotra tahiry famatsiana angovo 10 ka hatramin'ny 20 Kw.
niforona tamin'ny lelan-biconvex roa na telo nanatevin-daharana mankamin'ny axis mitsangana amin'ny farany ambany sy ambony, ahafahany manararaotra ny rivotra ao anaty tarika hafainganam-pandeha malalaka. Ny lesoka dia ny tsy fivadihan'izy ireo samirery ary mila rotor Savonius izy ireo.
Ahoana ny fomba fiasan'ny turbine axis mitsangana?
Ao amin'ny turbine mitsangana mitsangana, mihodina miaraka amin'ny hery manosika ny rivotra ny lelany. Ny turbin-drivotra mitsangana, tsy toy ny marindrano, dia mifanaraka foana amin'ny rivotra. Tsy maninona izay làlan'ny iray ihany satria afaka miasa izy ireo na dia mitsoka mafy aza ny rivotra. Ny tombony azo avy amin'ireny turbine mitsangana mitsangana ireny dia kely kokoa sy maivana kokoa noho ireo turbine manana ny marindrano izy ireo. Kely kokoa izy ireo, mamokatra angovo kely kokoa. Na izany aza, afaka manafana trano izy ireo, manana ny jiro anatiny sy ivelany ary mameno ny batterin'ny fiara elektrika.
Turbine axis marindrano
Ireo manana axis marindrano dia Ny be mpampiasa indrindra ary izy ireo no azontsika jerena amin'ireo toeram-piompiana misy rivotra mahery ireo izay ahafahanao mampiasa io karazana turbin-drivotra ambony 1 Mw mahery io.
Masinina mihodina io amin'ny ankapobeny izay ahavitan'ny angovo kinetika an'ny rivotra ny hetsika rehefa mihetsika amin'ny rotor izy izay matetika manana lelany telo. Ny hetsika fihodinana novokarina dia ampitaina sy ampitomboina amin'ny fampitomboana haingam-pandeha ho an'ny mpamorona herinaratra iray izay tompon'andraikitra amin'ny famokarana angovo herinaratra.
Ireo singa rehetra ireo mijoro eo amin'ny gondola izy ireo Napetraka eo an-tampon'ny tilikambo fanohanana izy io. Izy ireo no mahazatra izay hita any amin'ny faritra sasany amin'ny firenentsika izay manana faravodilanitra sy tontolo hafa fa manome angovo madio sy mora.
Ny turbine rivotra tsirairay dia misy microprocessor izay tompon'andraikitra amin'ny fifehezana ary mifehy ny fiantombohany, ny asany ary ny fikatonany. Izany dia mitondra an'ity fampahalalana sy angona rehetra ity any amin'ny foibe fanaraha-maso ny fametrahana. Ny tsirairay amin'ireo turbine-drivotra ireo dia mampiditra, eo am-pototry ny tilikambo, ny kabinetra misy ny singa elektrika rehetra (switch automatique, fanovana ankehitriny, mpiaro mahery vaika, sns.) Izay manamora ny fitaterana ny angovo herinaratra vokarina mandra-pifandraisan'ny tamba-jotra na ny fanjifana. hevitra.
Ny angovo azo avy amin'ny turbine rivotra miankina amin'ny herin'ny rivotra izay mamakivaky ny rotor ary mifanitsy mivantana amin'ny hakitroky ny rivotra, ny faritra nokosehin'ny lelany sy ny hafainganan'ny rivotra.
Ny fiasan'ny turbine rivotra miavaka amin'ny fihodinan'ny heriny izay manondro ny habetsaky ny hafainganam-pandehan'ny rivotra ahafahany miasa sy ny herinaratra ilaina amin'ny tranga tsirairay.
Karazana turbinin'ny rivotra inona no mahomby kokoa?
Raha ny fahombiazan'ny angovo no resahina, dia ny turbine mitsivalana no maharesy ny lalao. Ary izy ireo dia afaka mahatratra ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana ambony kokoa noho izany ilain'izy ireo ny boaty fanamoriana miaraka amin'ny tahan'ny fampitomboana fihodinana ambany. Ankoatr'izay, satria ny fanamboarana ireo turbinin'ny rivotra ireo dia tsy maintsy atao avo be ny fitomboan'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra dia ampiasaina amin'ny lafiny lehibe kokoa. Ao amin'ny sosona ambony amin'ny habakabaka dia avo kokoa ny hafainganam-pandehan'ny rivotra satria tsy manana karazana sakana izany.
Inona avy ireo fatiantoka ateraky ny turbin-drivotra VAWT?
Ny fatiantoka amin'ireo karazana turbin-drivotra ireo dia misy ireto manaraka ireto:
Ny vidiny voalohany amin'ny fametrahana dia avo dia avo.
Raha tsy maintsy any amin'ny faritra tsy misy rivotra be loatra ianao, dia mety izany tsy azo esorina ny fahombiazan'ny angovo.
Mety hanana olana amin'ireo mpifanila trano aminao ianao noho ny tabataba.
Ny turbines matetika tsy miasa afa-tsy amin'ny 30%.
Fampiasana turbin-drivotra sy tantara
Ny fampiasana angovo herinaratra avy amin'ny rivotra dia efa nampiasaina tamin'ny rotors rivotra amin'ny trano mitokana misy azy any ambanivohitra amin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX.
Fa ilay tena miloka amin'ity haitao ity tamin'ny taona 70 dia i Danemark. Io tranga io dia namela an'ity firenena ity hanana iray amin'ireo mpanamboatra mpitarika amin'ity karazana turbin-drivotra ity, toy ny any Vestas sy Siemens Wind Power.
Efa tamin'ny 2013, angovo avy amin'ny rivotra namokatra ny mitovy amin'ny 33% amin'ny fanjifana herinaratra tanteraka, miaraka amin'ny 39% amin'ny taona 2014. Ny tanjon'i Danemark dia hahatratra 50% amin'ny taona 2020 ary amin'ny 2035 84%.
Ny fanovana novokarin'ity firenena ity dia noho ny fandefasana CO2 avo lenta tamin'ny faramparan'ny taona 70, ka ny angovo azo havaozina no lasa safidy lehibe indrindra ho an'ity firenena ity. Izany dia nitarika ny fihenan'ny fiankinan-doha amin'ny angovo amin'ny firenena hafa ary ny fihenan'ny fandotoana manerantany.
Ny manan-tantara dia ny fametrahana an'i Danemark an'ny turbine rivotra voalohany nahatratra 2 Mw. Ny toby famokarana herinaratra dia nisy tilikambo fantsom-batana sy lelany telo. Mpampianatra sy mpianatra avy amin'ny sekoly Tvind no nanangana azy. Ary ny zavatra mahatsikaiky amin'ity tantara ity dia ireo "amateurs" ireo dia noesoesoana tamin'ny androny talohan'ny fitokanana. Mandrak'androany io turbinina io dia mbola miasa ary manana endrika mitovy amin'ny turbine rivotra maoderina indrindra.
Ny hoavin'ny turbin-drivotra
Hatramin'izao dia mbola mipoitra hatrany ny fanavaozana teknolojia manatsara ny fampiharana ny angovo avy amin'ny rivotra. Tamin'ny 2015, ny turbine napetraka lehibe indrindra dia ny Vestas V164 ampiasaina any akaikin'ny morontsiraka.
Tamin'ny 2014, mihoatra ny Turbine rivotra 240.000 niasa teto amin'izao tontolo izao izy ireo, namokatra herinaratra 4% manerantany. Tamin'ny 2014, ny totalin'ny fahaiza-manao dia nandalo 336 Gw niaraka tamin'i China, Etazonia, Alemana, Espana ary Italia ho mpitarika amin'ny fametrahana.
Ary tsy ireo firenena ireo ihany no mampitombo ny isan'ny turbine axis mitsangana na mitsivalana, fa ny maro hafa mitady fomba haharitra izy ireo toy ny mitranga any Frantsa miaraka amin'ny Eiffel Tower izay mamokatra heriny manokana ankehitriny noho ny turbine misy rivotra vaovao napetraka ary hasiana jiro LED, panneaux solaires ary rafitra fanangonana ranonorana hampiroborobo ny angovo madio sy mora.
Tsy azontsika hadino koa ireo andrana vaovao amin'ny endrika Turbinina 157 ho an'ny fiompiana rivotra vaovao 3 any Afrika Atsimo izay ho avy amin'ny tanan'ny iray amin'ireo mpanamboatra lehibe indrindra an'ity karazana haitao ity toa an'i Siemens. Hanampy eo anelanelan'ny 3 a capacité 140 mW izy ireo ary antenaina fa hapetraka amin'ny fiandohan'ny taona 2016 izy ireo hanomezana herinaratra an'ireo mponina manodidina ity firenena afrikanina ity.
Ny haitao misy turbine mitsingevana
Araka ny hitantsika tao amin'ny tantaran'ny angovo rivotra, angovo avy any ivelany nanomboka nivelatra tamin'ny 2009 rehefa napetraka tany Norvezy ny turbine mitsingevana Hywind izay mitentina 62 tapitrisa dolara.
Japan, taorian'ny loza nokleary Fukushima, dia namolavola ny fametrahana 80 turbine-drivotra an-dranomasina amin'ny morontsiraka akaiky amin'ny taona 2020.
Turbines Rivotra Proportless Vortex
Orinasa espaniola antsoina hoe Deutecno no manana namorona turbine rivotra tsy misy faritra mihetsika izay nahazo ny loka voalohany tamin'ny sokajy Angovo tao amin'ny The South Summit 2014.
Ireo turbin-drivotra tsy misy propeller ireo dia dia ho tompon'andraikitra amin'ny famongorana ireo turbin-drivotra goavambe izay manova ny faravodilanitra na aiza na aiza apetrany. Ny fampiasa azy dia hitovy fa amin'ny tahirim-bola be dia be, ankoatry ny hoe mora kokoa ny fikojakojana sy ny fametrahana azy.
Tsy maintsy misy koa a fihenan'ny fiantraikan'ny tontolo iainana ankoatr'izay dia manafoana ny tabataba vokarin'ny turbines nentin-drazana.
Miasa amin'ny fomba toy izany ny teknolojian'izy ireo mampiasa deformation vokatry ny hovitrovitra izay ateraky ny rivotra rehefa miditra am-peo ao anaty varingarina mitsivalana semi-henjana ary miorina amin'ny tany.
Ny ampahany lehibe amin'ny Vortex, izay varingarina, dia efa vita amin'ny fitaovana piezoelectric ary fiberglass na carbon, ary ny angovo herinaratra dia vokarin'ny fiovan'ny toetran'ireto fitaovana ireto.
2016 no taona izay vonona ny singa fitotoana rivotra voalohany.
Tetikasa somary manavao ny Wind Tree izay novolavolain'i NewWind ary izay ahitana ravina artifisialy 72. Ny tsirairay amin'izy ireo dia turbine mitsangana misy endrika conical ary manana masinina kely izay afaka miteraka angovo miaraka amin'ny tsio-drivotra 2 metatra isan-tsegondra.
Io dia mamela anao hiteraka herinaratra mandritra ny 280 andro amin'ny taona ary ny vokatra vokariny dia 3.1 kW miaraka amin'ireo turbine 72 mandeha. 11 metatra ny haavony ary 8 metatra ny savaivony, ny Wind Tree dia manakaiky ny haben'ny hazo tena izy ka afaka mifanaraka tsara amin'izany toerana an-tanàn-dehibe izany.
Un tetikasa manokana ary mametraka antsika alohan'ny fandrosoana ara-teknolojia izay mitady ny fomba hahomby kokoa sy hahafahana manome angovo ampy ho an'ny tariby herinaratra ampahibemaso na ho fanampiny ho an'ny trano iray.
Ampahany amin'ny turbinin'ny rivotra
Sary - Dans Wikimedia / Enrique
Turbine amin'ny rivotra iray manontolo afaka mahatratra hatramin'ny 200 metatra ny haavony ary 20 taonina ny lanja. Ny firafiny sy ny singa ao aminy dia sarotra ary amboarina mba hanatsarana ny famokarana herinaratra avy amin'ny hafainganam-pandehan'ny XNUMX ka hatramin'ny farany ambony.
Eo anelanelan'ny singa sy ampahany amin'ny turbine rivotramanana isika:
Ny fototry ny turbine rivotra dia tokony miraikitra tsara amin'ny fototra mafy. Ho an'ity dia misy turbine rivotra axis marindrano atsangana miaraka amin'ny fototra simenitra mihamafy ambanin'ny tany izay mifanaraka amin'ny tany misy azy ary manampy amin'ny fiatrehana ny enta-mavesatry ny rivotra.
Ny tilikambo dia ampahany amin'ny turbine rivotra izay manohana ny lanjany rehetra ary io no mitazona ny lelany hiala amin'ny tany. Vita tamin'ny beton nohamafisina teo ambany sy vy eo an-tampony. Hollow foana izy io raha avela hiditra amin'ny gondola. Ny tilikambo dia miandraikitra ny fampiakarana ny turbine rivotra ampy hahafahany manararaotra ny hafainganam-pandehan'ny rivotra azo atao. Ny vy mihodina na ny fiberglass nacelle dia miraikitra amin'ny faran'ny tilikambo.
Blades sy rotor
Ny turbine ankehitriny dia misy lela telo satria manome malama kokoa amin'ny fihodinana. Ny lelany dia vita amin'ny akora fitambatra polyester miaraka amin'ny fanamafisana ny vera na kofehy karbaona. Ireo fitambarana ireo dia manome fanoherana lehibe kokoa ny lelany. Ny lelany dia mety hahatratra 100 metatra ny halavany ary mifandray amin'ny foiben-tsarimihetsika. Misaotra an'ity hub ity, ny lelany dia afaka manova ny zoro misy ny lelany mba hanararaotra ny rivotra.
Momba ny rotors, amin'izao fotoana izao dia marindrano ary mety misy tonon-taolana. Raha ny mahazatra dia eo amin'ny ilan'ny rivotra ilay tilikambo no misy azy. Izany dia natao mba hampihenana ny enta-mavesatra tsipika eo amin'ny lelany izay miseho raha toa ka mihetsika ilay izy, satria raha apetraka eo ambadiky ny fiambenana ilay tilikambo dia hovana tanteraka ny hafainganam-pandehan'ny tranga.
Cubicle azonao ilazana izany Efitra maotera an'ny turbinin'ny rivotra. Mihodina manodidina ny tilikambo ny nacelle hametrahana ny turbine miatrika ny rivotra. Ny nacelle dia mirakitra ny boaty, ny zana-kazo lehibe, ny rafitra fanaraha-maso, ny generator, ny frein, ary ny mekanika mitodika.
Ny fiasan'ny boaty dia ny amboary ny hafainganam-pandehan'ilay fihodina manomboka amin'ny vatan-kazo lehibe mankany amin'ilay ilain'ny generator.
Amin'ny turbine rivotra ankehitriny misy karazana turbine telo tsy miova afa-tsy amin'ny fihetsiky ny mpanamboatra raha toa ka amin'ny toetran'ny hafainganam-pandehan'ny rivotra be loatra izy ireo ary ezahina hialana amin'ny be loatra.
Saika ny turbine rehetra dia mampiasa ny iray amin'ireo rafitra 3 ireo:
Generator Cage Induction
Generator fampidirana biphasic
Rafitra fanidiana rafitra fiarovana izany Izy io dia manana kapila izay manampy amin'ny toe-javatra maika na fikolokoloana hanakanana ny fikosoham-bary ary hisorohana ny fahasimban'ny rafitra.
Ny fitambolan'ny rivotra dia feno fehezin'ny rafitra fanaraha-maso. Ity rafitra ity dia misy solosaina mifehy ny fampahalalana nomen'ny rivotra vane sy ny anemometatra napetraka eo ambonin'ny nacelle. Amin'izany fomba izany, amin'ny fahafantarana ny toetr'andro, azonao atao tsara ny manamboatra ny milina sy ny lelany mba hanatsarana ny famokarana herinaratra amin'ny rivotra mifofofofo. Ny fampahalalana rehetra voarainy momba ny satan'ny turbine dia azo alefa lavitra any amin'ny mpizara afovoany ary voafehy ny zava-drehetra. Raha misy ny hafainganam-pandehan'ny rivotra na ny toetry ny andro dia mety hanimba ny firafitry ny turbinin'ny rivotra, miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso dia azonao atao ny mahalala haingana ny toe-javatra ary mampandeha ny rafi-freins, ka hisorohana ny fahasimbana.
Misaotra ireo faritra rehetra amin'ny turbine rivotra azonao atao miteraka angovo herinaratra avy amin'ny rivotra amin'ny fomba azo havaozina sy tsy mandoto ny tontolo iainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Turbinin'ny rivotra mitsangana
pablo acevedo g. dia hoy izy:
Manana tetik'asa famokarana herinaratra izahay. Mila fifandraisana aho hanombohana. Telefaona 57830415_7383284 Misaotra betsaka
Mamaly an'i pablo acevedo g.
Javier Garcia dia hoy izy:
Te-hahita turbine rivotra ho an'ny trano aho izay afaka mamokatra 24kwh isan'andro ho an'ny tetik'asa manokana ary afaka manondro ny vidiny, misaotra
Mamaly an'i javier garcia
Salama Javier .. tamin'ny fangatahanao dia hitako fa mila adiny iray kilowatt ianao… Atolotro anao ny vidiny sy ny kalitao tsara indrindra eo amin'ny tsena
noho izany dia mila ny mombamomba anao toy ny tanàna, firenena sns.
Jorge Paucar dia hoy izy:
Salama aho, eo am-panombohana an'ity tetik'asa ity aho, miaraka amin'ny valin'ny fampanantenan-tena fatratra, efa notsapaina ary ambany ny vidin'ny mailako. a_eletropaucar@hotmail.com Peru
Mamaly an'i jorge paucar
Francisco Villen. dia hoy izy:
Ireo behemoth an'ny mpamokatra herinaratra ireo dia manana lalana tena fohy, satria eo an-jorony ihany io, ny famokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny alàlan'ny andriamby andriamby (andriamby) ary ny trano rehetra dia afaka manana mpamorona azy avy, 4 na 5 kw amin'ny habaka mitovy amin'ny an'ny milina fanasan-damba.
Valiny tamin'i Francisco Villen.
Marlon escobar dia hoy izy:
Miarahaba anao, mila fampahalalana bebe kokoa aho hampiharana ny vahaolana amin'ny trano fonenana, te hampihena sy / na hanafoana ny fihinanana izahay; manana heater herinaratra ho an'ny pisinina sy jiro amin'ireo faritra iraisana rehetra izahay, azafady mba alefaso ny fampahalalana ara-teknika feno momba ireo mpamorona mitsangana.
Valiny tamin'i Marlon Escobar